ပေါ်တူဂီအသင်း ရှုံးနိမ့်မှုရဲ့ အဓိက တရားခံတွေကို ပျစ်ပျစ်နှစ်နှစ်ဝေဖန်လိုက်တဲ့ ရွိုင်းကီးန် – Sports A2Z
ပေါ်တူဂီအသင်း ရှုံးနိမ့်မှုရဲ့ အဓိက တရားခံတွေကို ပျစ်ပျစ်နှစ်နှစ်ဝေဖန်လိုက်တဲ့ ရွိုင်းကီးန်
ဆီဗီးလ်မြို့မှာ ယှဉ်ပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့ ယူရို ၂၀၂၀ ရဲ့ (၁၆)သင်း ရှုံးထွက် ပွဲစဉ်မှာ ပေါ်တူဂီအသင်းဟာ ဘယ်လ်ဂျီယံအသင်းကို ၁-၀ နဲ့ ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီး ယူရို ၂၀၂၀ ကို လက်ပြနှုတ်ဆက်ခဲ့ရပါတယ်။ ပေါ်တူဂီအသင်းရဲ့ ပေါင်(၉၇)သန်းတန် တိုက်စစ်ကစားသမား ဂျာအို ဖီးလစ်ရဲ့ လူစားဝင်ကစားတဲ့ ပွဲချိန် ၅၅ မိနစ်မှ စပြီး ပွဲအပြီးအထိ စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ရွိုင်းကီးန်က ပစ်ပစ်နှစ်နှစ် ဝေဖန်ခဲ့သလို ဘရူနို ဖာနန်ဒက်လည်း သူရဲ့ဝေဖန်မှုက မလွတ်ခဲ့ပါဘူး။
ဒီပွဲမှာ အသင်းခေါင်းဆောင် ခရစ္စတီယာနို ရော်နယ်လ်ဒိုတစ်ယောက်အနေနဲ့ ပွဲချိန်တစ်လျှောက်လုံး နေရာစုံမှာ အရွယ်နဲ့မလိုက်အောင် လိုက်လံရုန်းကန်ပေးနေချိန်မှာ ဂျာအို ဖီးလစ်နဲ့ ဘရူနို ဖာနန်ဒက်တို့ဟာ အသင်းအတွက် ဂိုးရနိုင်တဲ့ အခွင့်အရေးတွေကို ဖြုန်းတီးပစ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်လို့ အပြစ်တင်ခံနေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ITV Sport Radio မှာ ရွိုင်းကီးန်က ပေါ်တူဂီအသင်းအတွက် ဂျာအို ဖီးလစ်ရဲ့ အားထုတ်မှုအပေါ် မေးမြန်းခံရတဲ့အခါမှာတော့ “သူက ကွင်းထဲဝင်လာတယ်။ သူဘာလုပ်ခဲ့တုန်း။ ဒီကောင်က လိမ်လည်လှည့်ဖျားတဲ့ကောင်ဗျ ။ သူက သန်း (၁၀၀)တန်တာလား ? ဒါဆို ဂိုးပေါက်တော့ တည့်အောင်ကန်ရမယ်ဗျာ။ ကျွန်တော်သာ ရော်နယ်လ်ဒို ဆိုရင် အဝတ်လဲခန်းထိ အဲ့ကောင်နောက်ကို လိုက်သွားပြီး ကြိမ်းမောင်းဖြဲခွဲပစ်လိုက်မှာဗျ” လို့ ပြန်ဖြေခဲ့ပါတယ်။
ရွိုင်းကီးန်က ဆက်ပြီး ပေါ်တူဂီအသင်းအတွက် ဖီးလစ်ရဲ့ အတူတူ ပွဲချိန် ၅၅ မိနစ်မှာ လူစားဝင်လာခဲ့သည့် မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် ကွင်းလယ်ကစားသမား ဘရူနိုဖာနန်ဒက်စ်ကိုလည်း “သူ့ဘဝတစ်လျှောက် အဆိုးဆုံးပွဲထဲက ပွဲတစ်ပွဲ”ဟု ဝေဖန်သွားခဲ့သလို “ဖာနန်ဒက်စ်သာ ပင်နယ်တီ အဆုံးအဖြတ်ကန်ရင် ဘယ်လိုတောင် ဖြစ်မလဲ မတွေးဝံ့ပါဘူး။ သူ့အစား တခြားလူထည့်ရင်လည်း ရတာပဲလေ”လို့ ပြစ်တင် ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
“ဘယ်လ်ဂျီယံအသင်းကစားပုံက တည်ငြိမ်လွန်းနေခဲ့တယ်ဗျာ။ ဒါပေမယ့် ပေါ်တူဂီအသင်းကတော့ ဘယ်လ်ဂျီယံအသင်းရဲ့ ပင်နယ်တီဧရိယာ အပြင်နားမှာ အရည်အသွေးတကယ်နိမ့်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဖီးလစ်နဲ့ ဖာနန်ဒက်စ်က ပွဲအပေါ်သက်ရောက်မှု မရှိခဲ့ပါဘူး။ သူတို့ရဲ့ ဂိုးပေါက်ကန်သွင်းချက်တွေကလည်း စိတ်ပျက်စရာပါ” လို့ ဆက်ပြောခဲ့ပါတယ်။
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်မှာ ဂိုးဖန်တီးမှုတွေသာမက ဂိုးသွင်းယူမှုတွေများစွာပါ ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့ ဘရူနို ဖာနန်ဒက်စ်အနေနဲ့ ယူရို ၂၀၂၀ ပြိုင်ပွဲမှာ ၂၀၅ မိနစ် ကစားခဲ့ပြီး ဂိုးပေါက်ကန်သွင်းချက် ၄ ခါ ၊ ဂိုးပေါက်တည့်မှု ၁ ခါ ၊ ဂိုးဖန်တီးနိုင်မှုနဲ့ သွင်းယူနိုင်မှု နတ္တိသာ ရှိခဲ့ပါတယ်။
ယူရို ၂၀၂၀ ပြိုင်ပွဲမှ စောစောစီးစီးထွက်လိုက်ရတဲ့ စိတ်ပျက်ဖွယ်ရာ ရှုံးနိမ့်မှုအပြီးမှာတော့ ခရစ္စတီယာနို ရော်နယ်လ်ဒိုအနေနဲ့ နိုင်ငံလက်ရွေးစင်ကစားသမားဘဝမှ အနားယူဖို့ မစဉ်းစားသေးပဲ ၂၀၂၂ ကာတာ ကမ္ဘာ့ဖလားမှာ ပါဝင်ကစားပြီး နိုင်ငံအသင်းအတွက် အောင်မြင်မှု တစ်စုံတစ်ရာရယူပေးဖို့ ပစ်မှတ်ထားနေပါတယ်။
ဆီဗီးလ္ၿမိဳ႕မွာ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားခဲ့တဲ့ ယူ႐ို ၂၀၂၀ ရဲ႕ (၁၆)သင္း ရႈံးထြက္ ပြဲစဥ္မွာ ေပၚတူဂီအသင္းဟာ ဘယ္လ္ဂ်ီယံအသင္းကို ၁-၀ နဲ႔ ရႈံးနိမ့္ခဲ့ၿပီး ယူ႐ို ၂၀၂၀ ကို လက္ျပႏႈတ္ဆက္ခဲ့ရပါတယ္။ ေပၚတူဂီအသင္းရဲ႕ ေပါင္(၉၇)သန္းတန္ တိုက္စစ္ကစားသမား ဂ်ာအို ဖီးလစ္ရဲ႕ လူစားဝင္ကစားတဲ့ ပြဲခ်ိန္ ၅၅ မိနစ္မွ စၿပီး ပြဲအၿပီးအထိ စြမ္းေဆာင္ရည္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ႐ြိဳင္းကီးန္က ပစ္ပစ္ႏွစ္ႏွစ္ ေဝဖန္ခဲ့သလို ဘ႐ူႏို ဖာနန္ဒက္လည္း သူရဲ႕ေဝဖန္မႈက မလြတ္ခဲ့ပါဘူး။
ဒီပြဲမွာ အသင္းေခါင္းေဆာင္ ခရစၥတီယာႏို ေရာ္နယ္လ္ဒိုတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ပြဲခ်ိန္တစ္ေလွ်ာက္လုံး ေနရာစုံမွာ အ႐ြယ္နဲ႔မလိုက္ေအာင္ လိုက္လံ႐ုန္းကန္ေပးေနခ်ိန္မွာ ဂ်ာအို ဖီးလစ္နဲ႔ ဘ႐ူႏို ဖာနန္ဒက္တို႔ဟာ အသင္းအတြက္ ဂိုးရႏိုင္တဲ့ အခြင့္အေရးေတြကို ျဖဳန္းတီးပစ္ခဲ့တာလည္းျဖစ္လို႔ အျပစ္တင္ခံေနရတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။
ITV Sport Radio မွာ ႐ြိဳင္းကီးန္က ေပၚတူဂီအသင္းအတြက္ ဂ်ာအို ဖီးလစ္ရဲ႕ အားထုတ္မႈအေပၚ ေမးျမန္းခံရတဲ့အခါမွာေတာ့ “သူက ကြင္းထဲဝင္လာတယ္။ သူဘာလုပ္ခဲ့တုန္း။ ဒီေကာင္က လိမ္လည္လွည့္ဖ်ားတဲ့ေကာင္ဗ် ။ သူက သန္း (၁၀၀)တန္တာလား ? ဒါဆို ဂိုးေပါက္ေတာ့ တည့္ေအာင္ကန္ရမယ္ဗ်ာ။ ကြၽန္ေတာ္သာ ေရာ္နယ္လ္ဒို ဆိုရင္ အဝတ္လဲခန္းထိ အဲ့ေကာင္ေနာက္ကို လိုက္သြားၿပီး ႀကိမ္းေမာင္းၿဖဲခြဲပစ္လိုက္မွာဗ်” လို႔ ျပန္ေျဖခဲ့ပါတယ္။
႐ြိဳင္းကီးန္က ဆက္ၿပီး ေပၚတူဂီအသင္းအတြက္ ဖီးလစ္ရဲ႕ အတူတူ ပြဲခ်ိန္ ၅၅ မိနစ္မွာ လူစားဝင္လာခဲ့သည့္ မန္ခ်က္စတာယူႏိုက္တက္ ကြင္းလယ္ကစားသမား ဘ႐ူႏိုဖာနန္ဒက္စ္ကိုလည္း “သူ႔ဘဝတစ္ေလွ်ာက္ အဆိုးဆုံးပြဲထဲက ပြဲတစ္ပြဲ”ဟု ေဝဖန္သြားခဲ့သလို “ဖာနန္ဒက္စ္သာ ပင္နယ္တီ အဆုံးအျဖတ္ကန္ရင္ ဘယ္လိုေတာင္ ျဖစ္မလဲ မေတြးဝံ့ပါဘူး။ သူ႔အစား တျခားလူထည့္ရင္လည္း ရတာပဲေလ”လို႔ ျပစ္တင္ ေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။
“ဘယ္လ္ဂ်ီယံအသင္းကစားပုံက တည္ၿငိမ္လြန္းေနခဲ့တယ္ဗ်ာ။ ဒါေပမယ့္ ေပၚတူဂီအသင္းကေတာ့ ဘယ္လ္ဂ်ီယံအသင္းရဲ႕ ပင္နယ္တီဧရိယာ အျပင္နားမွာ အရည္အေသြးတကယ္နိမ့္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဖီးလစ္နဲ႔ ဖာနန္ဒက္စ္က ပြဲအေပၚသက္ေရာက္မႈ မရွိခဲ့ပါဘူး။ သူတို႔ရဲ႕ ဂိုးေပါက္ကန္သြင္းခ်က္ေတြကလည္း စိတ္ပ်က္စရာပါ” လို႔ ဆက္ေျပာခဲ့ပါတယ္။
မန္ခ်က္စတာယူႏိုက္တက္မွာ ဂိုးဖန္တီးမႈေတြသာမက ဂိုးသြင္းယူမႈေတြမ်ားစြာပါ ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ ဘ႐ူႏို ဖာနန္ဒက္စ္အေနနဲ႔ ယူ႐ို ၂၀၂၀ ၿပိဳင္ပြဲမွာ ၂၀၅ မိနစ္ ကစားခဲ့ၿပီး ဂိုးေပါက္ကန္သြင္းခ်က္ ၄ ခါ ၊ ဂိုးေပါက္တည့္မႈ ၁ ခါ ၊ ဂိုးဖန္တီးႏိုင္မႈနဲ႔ သြင္းယူႏိုင္မႈ နတၱိသာ ရွိခဲ့ပါတယ္။
ယူ႐ို ၂၀၂၀ ၿပိဳင္ပြဲမွ ေစာေစာစီးစီးထြက္လိုက္ရတဲ့ စိတ္ပ်က္ဖြယ္ရာ ရႈံးနိမ့္မႈအၿပီးမွာေတာ့ ခရစၥတီယာႏို ေရာ္နယ္လ္ဒိုအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံလက္ေ႐ြးစင္ကစားသမားဘဝမွ အနားယူဖို႔ မစဥ္းစားေသးပဲ ၂၀၂၂ ကာတာ ကမာၻ႔ဖလားမွာ ပါဝင္ကစားၿပီး ႏိုင္ငံအသင္းအတြက္ ေအာင္ျမင္မႈ တစ္စုံတစ္ရာရယူေပးဖို႔ ပစ္မွတ္ထားေနပါတယ္။
28 Jun ညနေခင်း နောက်ဆုံးရ လီဗာပူးလ်သတင်းများ စုစည်းမှု
28 Jun နောက်ဆုံးရ အာဆင်နယ်သတင်းများ စုစည်းမှု